HD भिडियो तपाईंको मार्केटिंग रणनीति को हिस्सा हुन सक्छ Martech Zone
बिहीबार, डिसेम्बर 11, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मेरो ग्राहकहरु मध्ये एक थियो Widen उद्यमहरू। विडेन एक year० बर्ष पुरानो कम्पनी हो जुन प्रिप्रेस टेक्नोलोजीमा सुरू भयो। मनपर्दैन केही प्रिन्ट कम्पनीहरू, विडेन छेउमा उभिएन र स्टार्टअपहरूले देखाए जस्तो गरी तिनीहरूको ईन्स्ट्रीलाई हेरेन। यसको सट्टामा विडेन इन्टरनेट डिजिटल सम्पत्ति पावरहाउसमा परिवर्तन भएको छ। अब तिनीहरू डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन उद्योगलाई रूपान्तरण गर्दैछन्।
तपाईंले विगतमा क्लाउड कम्प्युटि onमा केही पोष्टहरू पढ्नु भएको हुन सक्छ। मेरो रुचि को धेरै भन्दा पहिले काम गरीरहेको थियो BlueLock, क्लाउड कम्प्युटि technologies टेक्नोलोजीहरूमा एक नेता जो यहाँ इण्डियानापोलिसमा अवस्थित हुन्छ।
समस्या: HD भिडियो = Unaffordable ब्यान्डविथ र पूर्वाधार लागत
कम्पनीहरूले वेबमा उच्च परिभाषा भिडियोमा प्रवेश गर्न प्रयास गर्ने कम्पनीहरूका लागि, विशाल पूर्वाधार आवश्यकताहरूमध्ये एउटा चाहिं ब्राजिलियन्ट रिजोलुसनलाई उपभोक्तामा सार्नको लागि आवश्यक विशाल ब्यान्डविथ हो। विडेनले यसको प्रयोगको माध्यमबाट केही अनौंठो समाधानहरू विकास गरेको छ क्लाउड कम्प्युटि डिजिटल सम्पत्तिहरू सेवा प्रदान गर्न.
इम्बेड लिंकहरू टेक्नोलोजीको एक साधारण अंश हो जुन विडेनले उनीहरूको डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन प्लेटफर्ममा समावेश गर्‍यो। यसको ठूला फाईलहरू जस्तै छविहरू र भिडियोहरू अनलाइन प्रबन्ध गर्न र प्रकाशनको लागि मार्केटर कार्यहरूको लागि केहि अविश्वसनीय फाइदाहरू छन्।
विडेनको जेक एथेले मलाई यस रोमाञ्चकारी प्रविधिमा केही अन्तर्दृष्टि प्रदान गरे।
डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धनको लागि इम्बेड लि links्कहरू विडेनले क्लाउड कम्प्युटि of स्रोतहरू अपनाएकोले सम्भव भएको हो। पाठ्यक्रमले हामीलाई मागको लागि मिलाउन पूर्वाधार प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, हामी हाम्रो ईम्बेड लि links्क र युट्यूबको प्रयोगको बीच केहि भिन्नताहरू चिन्न सक्छौं। यूट्यूब भिडियो प्रकाशित गर्नको लागि गन्तव्य साइट हो र हामीले महसुस गर्‍यौं कि खोज र सामाजिकिय पक्षहरूको लागि उत्कृष्ट माध्यमको रूपमा।
हाम्रो टेक्नोलोजी एकदम भिन्न छ र मूल्य प्रस्तावहरूको बिभिन्न सेट प्रदान गर्दछ। विडेन प्लेटफर्म एक धनी मिडिया फाईलको सबैभन्दा हालको संस्करण प्रबन्ध गर्न एकल स्रोत नियन्त्रण पोइन्ट हो? छविहरू, अडियो / भिडियो, आदि।
विडेन टेक्नोलोजी मार्केटर्सलाई धनी मिडिया सामग्री फर्म्याटमा पुनःचित्रण गर्न मद्दत गर्दछ जुन उपयुक्त च्यानलमा प्रयोग गर्न मिल्छ? जे हुन सक्छ अनलाइन वा अफलाईन। उदाहरणको लागि भिडियो लिनुहोस्, विडेन प्रणालीले तपाईंलाई प्रसारण गुणवत्ता भिडियोलाई वेब क्वालिटी flv अन-द-फ्लाईमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ जहाँ हामी त्यो एकल फाइलको भण्डारण र ट्रान्सफर्मेशन ह्यान्डल गर्छौं।
अब एम्बेड लिंकहरू खेलमा आउँदछ जब मार्केटरहरू एचडी भिडियो अनलाइन प्रदर्शन गर्न चाहन्छन् र एचडी भिडियो डाउनलोड गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको उच्च मागलाई समर्थन गर्न पूर्वाधारहरू छैनन्। ती प्रयोगकर्ताहरूले पूर्व-रूपान्तरण गरिएको भिडियो फाइल खपत गर्दछन् र इम्बेड लिंक मार्फत क्लाउडबाट यसलाई पहुँच गर्छन्। त्यहाँ फाईल मर्मतसम्भार, अधिकार व्यवस्थापन र ब्रान्ड नियन्त्रण दृष्टिकोणबाट पनि धेरै लाभहरू छन्।
संसाधनहरू फैलाउन, ट्र्याक गर्न र ब्यवस्थापन गर्ने क्षमता मार्केटिंग विभागहरूको लागि बढ्दो समस्या हो जुन एचडी भिडियो र अन्य डिजिटल सम्पत्तीहरूको उपयोगको लागि रणनीतिहरू विकास गर्न र प्रबन्ध गर्न कोशिस गर्दैछ। विडेनले यस उद्योगमा केही अविश्वसनीय काम गरिरहेको छ, वास्तवमै उद्योग परिवर्तन गर्दै र समाधानहरू प्रदान गर्दछ जुन कम्पनीहरूलाई सस्तो भण्डारण र ब्यान्डविथको बिना सस्तो हुन्छ। यसले किनारा मार्केटिंग टेक्नोलोजी काटिरहेको छ।
टैग: Klout स्कोर
तपाईंको साइट भ्रमण गर्ने कम्पनीहरूको खोजी गर्नुहोस्